နိုင်ငံအသင်းနဲ့အတူ ဆုဖလားမရဖူးတဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမားများ (၂)
29 Nov 2018 . 6:35 PM
နိုင်ငံတကာဘောလုံးလောကမှာ ဂုဏ်သိက္ခာအမြင့်မားဆုံး ဆုဖလားတွေအဖြစ် ကမ္ဘာ့ဖလား၊ ယူရို၊ ကိုပါအမေရိကဖလား တို့ကို သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆုဖလားထဲက တစ်ခုခုကို ရယူနိုင်ဖို့က ဘောလုံးသမားတိုင်းအတွက် ကြီးမားတဲ့အိပ်မက်တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံကစားသမားဘ၀မှာ ဒီဆုဖလားတွေ မရဖူးတဲ့၊ မရခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေ အများကြီးပါ။ သူတို့တွေက ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ Akhayar Sports ပရိသတ်တွေအတွက် အပိုင်း(၂)အဖြစ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . .
အီတလီ ဘောလုံးလောကမှာသာမကဘဲ ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံး နောက်ခံလူလို့ သတ်မှတ်ရမယ့် ပေါ်လိုမာလ်ဒီနီ Paolo Maldini ဟာ လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့တော့ ဘာဆုဖလားမှ မရခဲ့ပါဘူး။ ချန်ပီယံလိဂ်ကို (၅)ကြိမ်အထိ ရခဲ့သူ၊ စီးရီးအေဖလား (၇)ကြိမ်အပါအ၀င် ဆုဖလား(၂၆)ခုအထိ ရခဲ့တဲ့ မာလ်ဒီနီဟာ လက်ရွေးစင်အဆင့်မှာ အောင်ြမင်မှုမရခဲ့တာက စိတ်မကောင်းစရာပါ။ နိုင်ငံအသင်းနဲ့အတူ မာလ်ဒီနီ အမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုက ၁၉၉၀ ကမ္ဘာ့ဖလား တတိယ၊ ၁၉၉၄ ကမ္ဘာ့ဖလား ဒုတိယ၊ ယူရို-၂၀၀၀ ဒုတိယ၊ ယူရို-၁၉၈၈ ဆီမီးဖိုင်နယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
နယ်သာလန်ဘောလုံးလောကကို တစ်ခေတ်ဆန်းခဲ့သူ ကစားသမားဘ၀မှာသာမကဘဲ နည်းပြဘ၀မှာလည်း ဆုဖလားတွေ ရယူခဲ့သူ ယိုဟန်ခရိုက်ဖ် Johan Cruyff လက်ရွေးစင်အဆင့်မှာတော့ အောင်မြင်မှုနဲ့ ကံမစပ်ဘူးလို့ ပြောရမယ်။ ခြေစွမ်းအကောင်းဆုံးအချိန် ၁၉၇၄ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ထိ ရောက်ခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယနေရာနဲ့ ကျေနပ်ခဲ့ရသလို ယူရို-၁၉၇၆ ပြိုင်ပွဲမှာလည်း တတိယနေရာသာ ရရှိခဲ့တယ်။
” Black Panther” (ကျားသစ်နက်)လို့ နာမည်ပြောင်ရခဲ့တဲ့ ပေါ်တူဂီ ဂန္ထ၀င်ကစားသမား အူဆီဘီယို Eusebio ဆိုတာက တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သူပါ။ ဥရောပဖလား (ချန်ပီယံလိဂ်)၊ ပေါ်တူဂီအမှတ်ပေးဖလား၊ လိဂ်ဖလားတွေအပြင် တစ်ဦးချင်းအကောင်းဆုံး ဆုအဖြစ် Ballon d’Or ဆုကို ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှာ ရရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အူဆီဘီယိုရဲ့ လက်ရွေးစင် ကစားသမားဘ၀က မလှပခဲ့ဘူး။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ပေါ်တူဂီအသင်းဟာ ဘောလုံးစင်မြင့်ထက်မှာ ရုန်းကန်နေရတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီး အူဆီဘီယိုဟာ ၁၉၆၆ ကမ္ဘာ့ဖလားတစ်ကြိမ်သာ ဆင်နွှဲခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်အထိ ရောက်ရှိအောင် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Ferenc Puskas – Hungary / Spain
ပွတ်ရ်ှကပ်စ် Ferenc Puskas လို တိုက်စစ်မှူးကောင်းတစ်ဦးရဲ့ အရည်အသွေးတွေ အားလုံးပြည့်စုံရဲ့သားနဲ့ နိုင်ငံအသင်းအတွက် ဆုဖလားမရခဲ့တာက ကံဆိုးမှုတစ်ခုပါပဲ။ ‘Deep lying Centre Forward’ ၊ ‘Second Striker’ Role တွေကို ဘောလုံးလောကမှာ စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ ပွတ်ရ်ှကပ်စ်အတွက် လက်ရွေးစင်ကစားသမားဘ၀ကို ဆုဖလားတွေနဲ့ အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့သင့်ပါတယ်။ ၁၉၅၄ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဟန်ဂေရီအသင်းဟာ ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ထိ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အနောက်ဂျာမနီအသင်းကို (၂)ဂိုးပြတ် ဦးဆောင်နိုင်ပေမယ့် ချေပဂိုး၊ အနိုင်ဂိုးတွေ ပြန်ပေးခဲ့ရလို့ (၃-၂)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် ပွတ်ရ်ှကပ်စ်အတွက် ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကို လက်တစ်ကမ်းအလိုမှ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။
ဒီကစားသမားတွေကို ကြည့်ရင် လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ အောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုတာက ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စဆိုတာ အထင်အရှားတွေ့နိုင်မှာပါ။ ဒီစာရင်းမှာ နောက်ထပ် ဘယ်သူ ကံဆိုးသူမောင်ရှင်အဖြစ် ပါဝင်လာဦးမလဲဆိုတာ . . .
Photo:YouTube,Tz,Getty Images,Boston Herald
နိုငျငံအသငျးနဲ့အတူ ဆုဖလားမရဖူးတဲ့ နာမညျကြျောကစားသမားမြား (၂)
နိုငျငံတကာဘောလုံးလောကမှာ ဂုဏျသိက်ခာအမွငျ့မားဆုံး ဆုဖလားတှအေဖွဈ ကမ်ဘာ့ဖလား၊ ယူရို၊ ကိုပါအမရေိကဖလား တို့ကို သတျမှတျရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီဆုဖလားထဲက တဈခုခုကို ရယူနိုငျဖို့က ဘောလုံးသမားတိုငျးအတှကျ ကွီးမားတဲ့အိပျမကျတဈခုပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ နိုငျငံကစားသမားဘဝမှာ ဒီဆုဖလားတှေ မရဖူးတဲ့၊ မရခဲ့တဲ့ နာမညျကြျောကစားသမားတှေ အမြားကွီးပါ။ သူတို့တှကေ ဘယျသူတှလေဲဆိုတာ Akhayar Sports ပရိသတျတှအေတှကျ အပိုငျး(၂)အဖွဈ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . .
အီတလီ ဘောလုံးလောကမှာသာမကဘဲ ဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ အကောငျးဆုံး နောကျခံလူလို့ သတျမှတျရမယျ့ ပျေါလိုမာလျဒီနီ Paolo Maldini ဟာ လကျရှေးစငျအသငျးနဲ့တော့ ဘာဆုဖလားမှ မရခဲ့ပါဘူး။ ခနျြပီယံလိဂျကို (၅)ကွိမျအထိ ရခဲ့သူ၊ စီးရီးအဖေလား (၇)ကွိမျအပါအဝငျ ဆုဖလား(၂၆)ခုအထိ ရခဲ့တဲ့ မာလျဒီနီဟာ လကျရှေးစငျအဆငျ့မှာ အွောငျမငျမှုမရခဲ့တာက စိတျမကောငျးစရာပါ။ နိုငျငံအသငျးနဲ့အတူ မာလျဒီနီ အမွငျ့ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ အောငျမွငျမှုက ၁၉၉၀ ကမ်ဘာ့ဖလား တတိယ၊ ၁၉၉၄ ကမ်ဘာ့ဖလား ဒုတိယ၊ ယူရို-၂၀၀၀ ဒုတိယ၊ ယူရို-၁၉၈၈ ဆီမီးဖိုငျနယျတှပေဲဖွဈပါတယျ။
နယျသာလနျဘောလုံးလောကကို တဈခတျေဆနျးခဲ့သူ ကစားသမားဘဝမှာသာမကဘဲ နညျးပွဘဝမှာလညျး ဆုဖလားတှေ ရယူခဲ့သူ ယိုဟနျခရိုကျဖျ Johan Cruyff လကျရှေးစငျအဆငျ့မှာတော့ အောငျမွငျမှုနဲ့ ကံမစပျဘူးလို့ ပွောရမယျ။ ခွစှေမျးအကောငျးဆုံးအခြိနျ ၁၉၇၄ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ဗိုလျလုပှဲအဆငျ့ထိ ရောကျခဲ့ပမေယျ့ ဒုတိယနရောနဲ့ ကနြေပျခဲ့ရသလို ယူရို-၁၉၇၆ ပွိုငျပှဲမှာလညျး တတိယနရောသာ ရရှိခဲ့တယျ။
” Black Panther” (ကြားသဈနကျ)လို့ နာမညျပွောငျရခဲ့တဲ့ ပျေါတူဂီ ဂန်ထဝငျကစားသမား အူဆီဘီယို Eusebio ဆိုတာက တဈခတျေတဈခါတုနျးက ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး တိုကျစဈမှူးတဈဦးဖွဈခဲ့သူပါ။ ဥရောပဖလား (ခနျြပီယံလိဂျ)၊ ပျေါတူဂီအမှတျပေးဖလား၊ လိဂျဖလားတှအေပွငျ တဈဦးခငျြးအကောငျးဆုံး ဆုအဖွဈ Ballon d’Or ဆုကို ၁၉၆၅ ခုနှဈမှာ ရရှိခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ အူဆီဘီယိုရဲ့ လကျရှေးစငျ ကစားသမားဘဝက မလှပခဲ့ဘူး။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက ပျေါတူဂီအသငျးဟာ ဘောလုံးစငျမွငျ့ထကျမှာ ရုနျးကနျနရေတဲ့အသငျးဖွဈပွီး အူဆီဘီယိုဟာ ၁၉၆၆ ကမ်ဘာ့ဖလားတဈကွိမျသာ ဆငျနှဲခှငျ့ရခဲ့ပမေယျ့ ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့အထိ ရောကျရှိအောငျ ပို့ဆောငျပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ပှတျရျှကပျဈ Ferenc Puskas လို တိုကျစဈမှူးကောငျးတဈဦးရဲ့ အရညျအသှေးတှေ အားလုံးပွညျ့စုံရဲ့သားနဲ့ နိုငျငံအသငျးအတှကျ ဆုဖလားမရခဲ့တာက ကံဆိုးမှုတဈခုပါပဲ။ ‘Deep lying Centre Forward’ ၊ ‘Second Striker’ Role တှကေို ဘောလုံးလောကမှာ စတငျမိတျဆကျပေးခဲ့တဲ့ ပှတျရျှကပျဈအတှကျ လကျရှေးစငျကစားသမားဘဝကို ဆုဖလားတှနေဲ့ အဆုံးသတျနိုငျခဲ့သငျ့ပါတယျ။ ၁၉၅၄ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ဟနျဂရေီအသငျးဟာ ဗိုလျလုပှဲအဆငျ့ထိ တကျရောကျခဲ့ပွီး အနောကျဂြာမနီအသငျးကို (၂)ဂိုးပွတျ ဦးဆောငျနိုငျပမေယျ့ ခပြေဂိုး၊ အနိုငျဂိုးတှေ ပွနျပေးခဲ့ရလို့ (၃-၂)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာကွောငျ့ ပှတျရျှကပျဈအတှကျ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုကို လကျတဈကမျးအလိုမှ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယျ။
ဒီကစားသမားတှကေို ကွညျ့ရငျ လကျရှေးစငျအသငျးနဲ့ အောငျမွငျမှုရဖို့ဆိုတာက ခကျခဲတဲ့ကိစ်စဆိုတာ အထငျအရှားတှနေို့ငျမှာပါ။ ဒီစာရငျးမှာ နောကျထပျ ဘယျသူ ကံဆိုးသူမောငျရှငျအဖွဈ ပါဝငျလာဦးမလဲဆိုတာ . . .